Suárez oo ku jira waqtigiisii ugu xumaa ayaa ka wanaagsan Lautaro Martínez… (Rikoorradan ayaa kuu caddeynaya) – Gool FM
Suárez oo ku jira waqtigiisii ugu xumaa ayaa ka wanaagsan Lautaro Martínez… (Rikoorradan ayaa kuu caddeynaya)
Dajiye August 25, 2020
(Yurub) 25 Agoosto 2020. Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu su’aal ka keenay heshiiska ay kooxda Barcelona dooneyso inay soo gabagabeyso inta lagu jiro suuqan xagaaga, kaasoo ah inay la soo saxiixato weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martínez, si uu ugu noqdo badelka Luis Suarez oo shaki la galinayo mustaqbalkiisa garoonka Camp Nou.
Macalinka cusub kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa Isniintii shalay aheyd kala xiriiray Luis Suarez qadka Taleefanka si uu ugu sheego inuusan qeyb ka aheyn qorshihiisa xilli ciyaareedka cusub.
Barcelona ayaa aaminsan in Lautaro Martínez uu yahay bedelka ugu fiican ee Luis Suarez kaddib xilli ciyaareedkiisii ​​fiicnaa ee uu la qaatay Inter Milan, gaar ahaan maadaama uu xiriir wanaagsan la leeyahay Lionel Messi, kaasoo kaga garab ciyaaraya xulka qaranka Argentina.
Haddaba Wargayska “Marca” ayaa wuxuu tooshka ku ifiyay rikoorrada labadan ciyaaryahan, waxaana loo arkaa in xoogaa shaki laga muujin karo, madaama Lautaro xilli ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa ilaa haatan uu dhaliyay kaliya 21 gool, waana tirada goolasha uu dhaliyay Luis Suarez oo qaadanaya mid ka mid ah xilli ciyaareedkiisii ​​ugu xumaa ee xirfadiisa ciyaareed, iyo kiisii ugu xumaa abid ee maaliyada Barca ah.
Arrintu halkaas kuma joogsan, maadaama Suárez uu ciyaaray kaliya 36 kulan tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkii dhawaan la soo gabagabeeyay, haddana wuxuu gool dhaliyay 126 daqiiqo kasta, halka Lautaro oo ciyaaray 49 kulan, uu gool ku dhaliyay 171 daqiiqo kasta, tanina waxay sharraxaysaa farqiga weyn ee u dhexeeya labada ciyaaryahan heerkooda gooldhalineed.
Marka laga hadlayo gool caawinta, Waxaa sidoo kale jira in Suárez uu si weyn u sarreeyo, kaasoo caawiyay 12 gool, taasoo celcelis ahaan ka dhigay inuu sameeyay baasas dhameystiran seddexdii kulanba mar, halka Lautaro uu sameeyay kaliya 7 gool caawin, wuxuuna celcelis ahaan sameeyay baasas dhameystiran toddobadii kulanba mar.
Kooxda PSG oo qorsheyneysa inay dib u midoobaan xiddigaha Suarez iyo Neymar
Kaddib Suárez waa kuwee labada xiddig kale ka tirsan Barcelona ee la filayo inay qaado seefta Ronald Koeman??